Nhau, 01 Kubvumbi 2013
Muvhuro 1 Kubvumbi 2013
VaNcube Vanonyorera Tsamba kuna VaKikwete Vachiti Psaitwe Sarudzo Dzine Mutauro
Munyori mukuru musangano reSADC, VaTomaz Salomao vanoti havasati vatambira tsamba kubva kumutungamiri wechimwe chikwata cheMDC VaWelshman Ncube yekuti havasi kutambira zviri kutaurwa neZanu-PF zvekuti sarudzo dziitwe nechimbi chimbi .
Komiti yaikokera hurongwa hwekunyorwa kwebumbiro remitemo idzva, yemanagement committee inonzi mukupera kwesvondo yakagadziridza zvimwe zvikamu zvegwaro rebumbiro idzva, senzira yekujekesa gwaro iri
Dynamos Inoitazve Mangange muCastle Premier League
Chikwata cheDynamos chaitazve mangenge nechikwata cheChicken Inn mumutambo wacho wechipiri weCastle Lager Premier Soccer league watambirwa kunhandare yeRufaro.
Kurume 29, 2013
VeMachechi Vobatana Mukukurudzira Runyararo
Masangano emachechi makuru munyika anoti reZimbabwe Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, neEvengelical Fellowship of Zimbabwe, abatana mukuumba sangano rimwe chete rinonzi Ecumenical Peace Observation Initiative in Zimbabwe, kana kuti EPOIZ, kuitira kuti akurudzire runyararo munyika.
Mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, pamwe nevatungamiri nenyika dzemuSADC vanoti vanoda kuti Zimbabwe igadzirisezve nekukwenenzvera gwara resarudzo kana kuti election roadmap sarudzo dzisati dzaitwa.
Nyaya yesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino inenge yave kuburitsa kusawirirana nekusashanda pamwe kuri muhurumende yemubatanidzwa, zvichitevera danho ratorwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, rekuti vange vaine chekuita nenyaya yesarudzo iri mudare repamusoro yakakwidzwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe
VaMpofu neVamwe Vavo Vanobvisiswa Mari yeChibatiso
Dare repamusoro rapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuvashandi vana vemumahosifi emutungamiri wehurumende avo vakasungwa musi wa17 Kurume.
VaLovemore Madhuku vanoti zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika atore zvakadzama mavhoterwo akaitwa pareferendamu.
Masahwira eZimbabwe Ozeya Nzira Dzekubatsira Nyika Iyi
Makurukota matatu ehurumende akaita neChipiri hurukuro nevamiriri venyika dzekumawirira senzira yekumutsiridza hukama hweZimbabwe nenyika idzi.
Amai Beatrice Mtetwa vaburitswa mutirongo neMuvhuro mushure mekunge dare repamusro ravabvumidza kubhadhara mazana mashanu emadhora semari yechibatiso.
Vatungamiri vehurumende vasangana neMuvhuro vakazeya maitiro emapurisa ayo ari kungosunga sunga vanhu.
VaMugabe Votsikazve Madziro paSarudzo dzeBy-Election
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti hazvikwanisike kuti vatare zuva richaitwa sarudzo dzema by elections musi wa 31 Kurume sezvakatarwa nedare repamusoro gore rapera sezvo pasisina nguva yekuita izvi.